Ingane iqala ukukhuluma, indlela yokumsiza?
Izingane Psychology kanye nentuthuko
Ingane ikhula, iba ngokwengeziwe, ivula amathuba amasha. Kanye nekhono lokuhamba, ikhono lokukhuluma mhlawumbe yimpumelelo enkulu eyenziwa yindoda encane. Futhi isigaba esithandekayo kakhulu kubazali. Phela, wonke umuntu ufuna ingane yakhe ifunde ukukhuluma ngokushesha, ngokufanele futhi ngaphandle kwezinkinga. Futhi bambalwa kakhulu abantu abazi ukuthi abazali bangenelela kule nqubo futhi bayayidinga. Ngaphezu kwalokho, kuvame ukusukela ekushisekeni nasezingeni lokubekezela kwabazali ukuthi ukuthuthukiswa kwamakhono okukhuluma wengane kuncike. Ngakho, ingane iqala ukukhuluma-ingayisiza kanjani? Yini evamile ekuthuthukiseni inkulumo yabantwana, futhi yini okufanele ngiqale ukukhathazeka ngayo? Sizokusiza ukuthi uqonde lokhu kanye nhlobo.
Intuthuko yenkulumo: izinyanga ezingu-1-3.
Empeleni, inkulumo kule minyaka iqala ngokukhala. Ngeke ukholwe, kodwa inyane alizange likhale njengalelo. Noma yimuphi umama uyazi ukuthi lena yiyona "inkulumo" eyinhloko yentombazane encane. Kukhona ama-intonations ahlukile, nesimo esihlukile nesimiso somsindo. Kamuva, ukukhala kuyashintsha, kuqhubekela phambili ekugqibeleni kanye nazo zonke ezinye imisindo evulekile, engaxhunyiwe nganoma iyiphi indlela. Sekuvele kulula kuwe ukuthi uqonde imbangela yokubonakaliswa kwemisindo ethile. Kungakhathaliseki ukuthi ingane idinga i-diapers ehlanzekile, ifuna ukulala, ilambile noma enye into.
Intuthuko yenkulumo: izinyanga ezingu-4-12.
Ngokusobala, ingane yakho ngeke isinikeze incazelo kulokho akushilo ngalesi sigaba. Nakuba uzozwa "umama" noma "ubaba" ongeyena. Imizamo yokukhuluma izoshintsha enye ingxoxo ende. Kule minyaka yobulimi bezingane, konke kuzwakala okufanayo, kungakhathaliseki ukuthi ukhuluma ngani: IsiNgisi, iSpanishi, isiJapan noma isi-Urdu. Ingane yakho izoqala ukusebenzisa imisindo ethile ezwakalayo ehlukile kwabanye. Lokhu kungenxa yokuthi uzizwa "ukhululekile" lapho eshicilela.
Lapho ingane ikhula, isondela emakethe "unyaka owodwa," uqala kancane kancane ukuqonda lokho okushiwo. Lokhu kungukuthi uyakuzwa futhi ilandele indlela yakho yokukhuluma. Ingane yakho izophinde iqonde imiyalelo elula, njengokuthi: "Nikeza umama incwadi". Lesi yisikhathi lapho ungaqala ukuthonya ukuthuthukiswa kwentuthuko yengane yakho. Ochwepheshe bacebisa ukuba baqale ukucula ngezingoma ezingane. Kuzwakala kungavamile, kodwa kubasiza kakhulu ukuthuthukisa amakhono abo olimi. Umsindo obizwa ngokuthi "ukucula" kulula ukubiza futhi unikeze imizwelo emihle. Yebo, yebo, zama - uzomangala umphumela.
Ukuthuthukiswa kwenkulumo: izinyanga ezingu-12-17.
Ngalesi sikhathi, ingane iqala ukubiza amagama alula abalulekile kuye. Ngokuvamile lawa magama anesigcawu esisodwa. Isibonelo, nikeza, uphuze, njalo, njalonjalo. Futhi, ingane izama ukubiza amagama namazwi amaningi, ngokuvamile "ukunciphisa". Isibonelo, ake sihambe - dm, ngifuna - chu. Iphuzu elibaluleke kakhulu kubazali akufanele livumele ingane ukuba isetshenziswe kabi kabi lawa magama. Kubalulekile ukubiza igama ngokuphelele, ngokunembile, kancane kancane. Akudingekile ukuba ucindezele ingane ukuba iphinde iphinde iphinde izwe indlela yokubiza leli gama noma lelo gama. Ngokuvamile abazali abaphuthelwa ngalesi sikhathi, bathi, bazokhula - bafunde. Esikhathini esizayo, izinyane lilandela indlela yokuncintisana okungenani, ukuvilapha ukubiza amagama ngokuphelele. Lokhu kungaba inkinga enkulu esikhathini esizayo.
Izwi lakhe lomntwana walesi sikole kufanele libe ngamazwi angama-20, nakuba ezinye izingane zingakwazi ukukhuluma okuningi kakhulu, futhi kancane kancane. Ngalesi sikhathi, usuvele uzama ukukhuthaza inkulumo yengane. Isibonelo, bonisa izithombe ezilula bese ucela umntwana ukuthi abize lokho okudwetshiwe. Ngikholelwa, usevele ekwazi ukubiza izinto ezijwayelekile. Kungase kungabi njalo njalo, kepha kufanele ukhuthaze njalo imizamo yengane, ulungise ukubiza amagama. Yenza ibe ngumdlalo. Ungathola uhlelo lokukhuthaza - imiklomelo emincane. Uthe kahle - lo ngumvuzo wakho.
Uma ungakaqali okwamanje, zama ukufunda nengane. Cha, yebo, akukhona ngokufunda i-ABC. Vele uhlale eduze komntwana, thatha incwadi ngezithombe ezinkulu ezinhle futhi ufunde. Ingane izobukela futhi ilalele - ukuqeqeshwa okungcono kwamakhono okukhuluma. Yenza ukufunda umkhuba wansuku zonke. Lokhu kuzokukhonza kahle, futhi izingane ziyakuthanda kakhulu ukufunda "izithombe ezinhle" ngokwabo
Kule minyaka yobudala, ingane yakho isazi kakade ukubaluleka kokukwazi ukukhuluma. Into eyinhloko kuye ekuqaleni ukuthola lokho akufunayo. Bese-veza okuthile, wabelane ngemizwa, ujabule, ukhononde, njll. Inkulumo iba yisisekelo sokuxhumana kwengane. Sekela kulo. Lokhu kubaluleke kakhulu.
Ukuthuthukiswa kwenkulumo: eyodwa nesigamu kuya eminyakeni emibili.
Ulwazimagama wengane yakho luba lukhulu futhi lukhulu futhi lungaba ngamagama angu-100. Amazwi amaningi azoqhubeka e-monosyllabic, kodwa uzozwa ukuhlanganiswa kaningi kwamagama amabili noma ngaphezulu. Isibonelo, "unike iphariji", "ijusi". Ngokuvamile ingane ihlanganisa amagama hhayi kahle, idibanisa amafomu kanye nokuphela. Lokhu kuvamile. Kungaba yindabuko ukulindela inkulumo yokufunda evela emntwaneni oneminyaka eyodwa. Kodwa zama ukulungisa, okufanayo, okudingayo. Futhi kusukela ngalesi sikhathi ukusebenzisa ama-pretexts alula, afana ne- "ku", "ku", "ngenhla". "Ngaphansi", njll.
Ingane yakho izophinde ibuze imibuzo elula, ishintsha ithoni yezwi lakhe ukuze "iqinise" incazelo yawo. Ungamqedi ingane! Njalo uphendule imibuzo, yebo elula kakhulu. Ngikholelwa, ingane ifuna ukwazi konke, idinga izimpendulo. Futhi lapha asikhulumi nje ngentuthuko yenkulumo, kodwa futhi mayelana nokuthuthukiswa okuphelele kwengane yakho.
Intuthuko yenkulumo: iminyaka engu-2-3.
I-silulumagama yengane yakho sesivele isondela kumazwi angu-300. Ungakwazi ukwenza imisho emifushane. Isibonelo: "Ngiphuza ubisi," "Nginike ibhola." Lokhu kuyiminyaka engokomzwelo kakhulu, lapho ingane "ikhuluma" hhayi nje ngosizo lwamagama, kodwa iphinde ibambe izenzo, ubuso obuso, konke okukwazi ukukusho. Ama-whims avamile ngenxa yokuthi ayimqondi, angakwazi ukuvuselela ukubiza kahle amagama namagama emntwaneni, futhi ngokuphambene - bavaliwe futhi bayeke ukuthuthukisa ngokwezwi. Kubaluleke kakhulu kubazali ukusekela ingane yabo, zama ukumqonda, ukuthuthukisa isithakazelo ekufundeni amagama amasha, nokuwasebenzisa ngokunembile.
Ukusiza, futhi, izincwadi ziza. Uma ungakabanjanga ingane kubo - yenza manje! Kamuva kuyoba nzima nakakhulu. Dlala nezingane ngamagama - amagama wezinto ezihlukene, imiqondo nokuzwa.
Intuthuko yenkulumo: iminyaka engu-3-4.
Kule minyaka, abantwana bavame ukwazi amagama angaphezulu kuka-1000 bese baqala ukukhuluma ngemisho eyinkimbinkimbi. Kubaluleke kakhulu ukufundisa ingane ukusebenzisa kahle uhlelo lolimi. Ngikholelwa, usevele akwazi ukuhlanganisa lolu lwazi ngezinga elingenalutho. Khuluma kahle ngokwakho! Buka inkulumo yakho, ngoba zonke iziphambeko zakho nokunganakwa kuzokwenziwa futhi kuphindwe yingane.
Kuzoba namanje imisindo embalwa engaba nzima kumntanakho. Isibonelo, "Р", "Ч", "Щ", kodwa ngokuvamile ingane yakho izokhuluma ngendlela yokuthi abantu abaningi bayayiqonda. Uma kunoma yikuphi umsindo onikezwa ingane nzima kakhudlwana - sebenzisa ngaphandle kwalokho. Ngendlela yomdlalo, ngosizo lwezinkondlo noma izingoma ezihlekisayo, ungaqeqesha ingane ngokubiza amagama. Ungagijimi ngalesi sikhathi!
Izingane zizokujabulela izindaba zakho nezingoma ngaphambi kokulala. Bazobuza imibuzo eminingi mayelana nezwe elibazungezile. Bayothola nethuba lokuthi bangakanani ubudala, bengabonisi eminwe yabo.
Yini abazali okufanele bayenze?
Ungamsiza kanjani ingane ukuba ifunde ukukhuluma kahle futhi ngokuhamba kwesikhathi? Futhi kufanelekile yini ukwenza noma yini? Okufanelekile! Ochwepheshe baye bathola amathiphu amaningana ayisisekelo ukuthi baziphathe kanjani nabazali abangabantwana babo abaqala ukusho ukuthi:
- Funda ukuphumula: ukunakekelwa ngokweqile ukuthi ingane yakho iyazi kangaki amagama, ukuthi ngokucacile uyayisho kanjani, ngeke ikusize noma ingane ngokwayo.
- Isibonelo esiphilayo sibalulekile: Sithatha ingane yethu ezindaweni eziningi futhi sibanike ithuba lokubona nokuzwa abantu, izinto nezinto ezizungezile. Lena yindlela enhle yokubasiza bafunde ukukhuluma.
- Ungakhulumi nabo njengomuntu omdala: Ukukhuluma nengane njengokungathi akusikho 20 ukuwasiza ukuba bafunde. Kumele bazwe imisho emifushane, bekhathazeke ngezwi lakho, ukubasiza ukuba bajwayele ukukhuluma nabantu abadala.
- Bafundise ngezinto ezilula: Qala ngezinto ezilula ezihlekisayo, njenge, isibonelo, amazwi wezilwane. Bamba ukunakwa kwabo, futhi bazoqala ukukukopisha.
- Qala ukukhuluma nabo ngokushesha: Izinsana zifunda ulimi kusukela ngesikhathi sokuzalwa kwazo. Bahlukanisa phakathi kwamazwi nemisindo, besesiswini sikamama.
- Funda izinkondlo, uhlabelele izingoma: Ziyindlela enhle yokusiza ingane ukufunda isakhiwo solimi. Baphinde bavumele abazali ukuba bahlanganyele ngendlela ehlekisayo nengane yabo.
- Ungathembeli ku-TV: Ingane encane ayiboni inkulumo evela esikrinini! Cha (ngisho nezingane) zokusakazwa kungashintsha umuntu ophilayo, izwi lakhe elithambile, ubuso obomomothekayo.
Amanye amathiphu okuthuthukisa inkulumo yengane.
- Sebenzisa amagama afanelekile: Qinisekisa ukuthi ulimi olusebenzisayo luyingxenye yokuphila kwansuku zonke nolwimi lomntwana. Khuluma ngokumane, ngamazwi aqondakalayo, ngisho nokuzwakala.
- Khuluma kancane: Ingane yakho kufanele ikhethe amagama owasebenzisa, okudingekayo kuye. Ngakho ungasheshi enkulumweni yakho.
- Phinda izikhathi eziningana: Kungaba kubi, kodwa ukuphindaphinda amagama nemishwana ngokuphindaphindiwe kuzosiza ingane yakho ifunde.
Yini engathinta ukubambezeleka ekuthuthukiseni inkulumo.
Khumbula ukuthi zonke izingane zikhula ngokuhlukile. Ngakho-ke, nakuba ingane yakho ingakwazi ukusho okuningi kusuka kolwazi lwabanye, lokhu akusho ukuthi kunezinkinga. Kodwa-ke, ngezinye izikhathi into evela ngaphandle ingamvimbela ngempela ingane ekuthuthukiseni. Kunezici ezithonya inkulumo yabantwana. Isibonelo, izifo zezindlebe zingaholela ekubambezelekeni kwenkulumo, ngakho qiniseka ukuthi ingane idlulisele ukuhlolwa okuzwakalayo kokuzwa.
Kukhona uhlelo olulula ukuthi uhambe. Ingane eneminyaka engu-1 isebenzisa imisho yegama eli-1, iminyaka emibili - kusuka kumagama angu-2, eminyakeni emi-3 - kusuka kumagama amathathu. Uhlelo luyimigomo, kodwa kulo lonke luhambisana nezici zeminyaka yengane.
Kubalulekile ukukhuluma ngokushesha kumhlinzeki wezempilo uma kukhona okulandelayo kusebenza kumntanakho:
Ingane yakho ayilaleli noma iphendula imisindo
Ingane yakho inenkinga yokunwa, yokugwinya noma yokufuna
Ingane yakho ayisho namagama emva kwezinyanga ezingu-18
Ingane yakho inenkinga yokuqonda lokho okushoyo
Ingane yakho inezwi elingavamile noma i-stutters
Kunzima kakhulu kulolu daba ukudweba umugqa phakathi "okuvamile" nokuthi "ukukhubazeka." Izingane zikhula ngokungafani. Abanye baqala ukukhuluma ngemva konyaka, abanye emva kokubili. Kamuva, njengomthetho, bonke "balinganisa" bese bekhula izingane ezinempilo enhle. Kodwa abazali basalokhu bekhathazekile. Kulo mbuzo ochwepheshe banombono olandelayo: "Uma ingane yakho ingakwazi ukuqonda okungaphezu kwelilodwa igama emgqeni eneminyaka engu-2 ubudala, yilokho okubaluleke kakhulu."
Ngakho-ke, ngisho noma ingane yakho ingakhulumi, kodwa ngokushesha iqonda umusho: "Faka izicathulo zakho uhambe lapha - ngizokunika ithoyizi" - awukwazi ukukhathazeka kakhulu.
Umthelela omubi wethelevishini ezinganeni
Ukuthuthukisa imidlalo yebhola yezingane
Ubusuku buvutha izingane
Izindlela zokusebenza nokwesaba kwezingane
Indlela yokufundisa izinyanga nezinyanga zezingane
Ungamsiza kanjani ingane ukukhuluma?
Luhlobo luni lwezingane eziba amasela?
Biography: Alexander Abdulov
Amaphutha wezezimali zebesifazane
Amathiphu onokwenza ama-eyelashes aqinile futhi aqinile ekhaya
Isaladi elula yenkukhu kanye noshizi
Yikuphi okungcono: izicathulo ezinesithende noma ngezinyawo?
Yeka iholide ngoJuni 12, 2016 eRussia, indlela yokuphumula. Umlando weholide ngoJuni 12, igama elisemthethweni
Ngingawuthola kanjani ubulili bomntwana ngokuvuselela igazi labazali?
Izidakamizwa ezisetshenziselwa i-vasodilation
Izakhiwo eziwusizo zama-capers nokusetshenziswa kwazo ngezinhloso zokwelapha
Izinzuzo Nezidingo Zokuhlinzwa KwePlastiki
Imithetho yokuziphatha emanzini
Izinzuzo zokuhlukahluka ziba nobuhlobo obuseduze
Umkhuba wokucela ibhodlela kuyingxenye yentuthuko
Izindlela zokwelapha ukuphendula okwenziwe izifo ezinambuzane ezinamaqanda
Imisebenzi Yokuthuthukiswa Kwezingane
5 imikhuba yakho ezobhubhisa uthando lwaKhe
I-pizza ne-porcini amakhowe, i-parmesan ne-purple lu